itai dzamara on News24
ARTICLES RELATING TO ITAI DZAMARA
Amnesty International's new leader says his first act is writing to Zimbabwe's next president about the disappearance of activist Itai Dzamara, saying "whoever leads the new government must move to undo the injustices of the past."
Dozens of Zimbabweans have protested as Harare-based Western diplomats called on the new government to investigate the abduction three years ago of a rights activist and firebrand critic of ex-ruler Robert Mugabe.
Wife of missing Zimbabwean activist who was abducted by suspected state agents in 2015 after urging Mugabe to resign says she hopes the country's new leader will shed light on what happened
She bears scars from police beatings, has been arrested many times, detained for months, and become the first person to be convicted over mass anti-government protests last year.
The family of anti-government activist missing in Zimbabwe, Itai Dzamara, has marked the second anniversary of his abduction.
Zimbabwean activist Patson Dzamara speaks out about his abduction ordeal, and the AU is set to hold its first-ever debate for the five candidates seeking to head the continental bloc.
Riot police are patrolling in the capital to prevent crowds gathering after civil action groups vowed to hold the first anti-government protest in several weeks.
An online media watchdog in Zimbabwe has confirmed reports of the detention of a student leader who held up a placard demanding jobs during a graduation ceremony at the University of Zimbabwe.
Close to 18 months since Zimbabwean pro-democracy activist Itai Dzamara disappeared, his family has said that they would continue searching for him "for as long as it would take to find him".
Zimbabwean activist Patson Dzamara has urged President Emmerson Mnangagwa to launch a thorough investigation into his brother Itai Dzamara's disappearance nearly three years ago.
A prominent activist in Zimbabwe is chronicling his unpaid work as a labourer at the Harare Magistrates’ Court with thoughtful posts on Facebook.
Western officials in Zimbabwe have criticised the authorities over the investigation into the abduction of a leading critic of President Robert Mugabe two years ago.
Critics of Zimbabwean President Robert Mugabe say he is intent on becoming life president, and Nigerian lawmakers are to visit South Africa over recent xenophobic attacks.
Pro-democracy activists in Zimbabwe are worried that a period of gross human rights abuses may be returning to the southern African nation after a prominent social rights activist was abducted by unknown assailants this week and left for dead in Harare.
Zimbabwean activist Patson Dzamara has been released from hospital after spending at least four days at a private hospital in Harare, following his abduction last week.
A Zimbabwean activist Patson Dzamara is in hospital after he was allegedly abducted and assaulted ahead of a planned demonstration against the government's controversial new bank notes, a protest movement says.
Rights lawyers in troubled Zimbabwe have warned they are in for "a busy weekend" after dozens of activists were reported arrested in several towns and cities during demonstrations for electoral reforms.
The brother of missing Zimbabwean activist Itai Dzamara, who is currently in neighbouring South Africa, has claimed that he would never run away from president Robert Mugabe's "brutal" regime.